I-Cape Cod epholileyo - Igumbi leYellow Rose - I-Airbnb
I-Cape Cod epholileyo - Igumbi leYellow Rose
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDaneen
Sinamagumbi ama-4 anomtsalane afumanekayo kwiindwendwe. Olu luhlu lolwegumbi lerozi etyheli. Kumgangatho wesibini - izinyuko ukufikelela. Inebhedi enkulu enomandlalo womqamelo. Eli gumbi linebhafu yabucala. Olunye udweliso lwethu ligumbi eliluhlaza okwesibhakabhaka kunye negumbi lerozi encinci, zombini zingaphaya kweholo ukusuka kwigumbi elityheli. Ibhulowu kunye nencinci zikwabelana ngegumbi lokuhlambela. Sikwanayo negumbi le rose elimhlophe kumgangatho wethu wokuqala. Inegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kulo lonke iholo.
Umkhwe wethu naye uhlala nathi kwaye uthanda umculo omdala welizwe, ngoko ke ukuba ufuna ukuhlala kwaye ufunde malunga neentsuku zakudala - ungumfana wakho.
Sikwanayo nemidlalo yebhodi, amakhadi, i-WII, iiNetflix, kunye neencwadi ukuba uzonwabele.
Sinosapho kunye nabahlobo abakhe bandwendwele ngamanye amaxesha kodwa bonke banobubele kwaye bayayicingela indawo yakho kunye nokubabucala kwakho. Bangathanda ukuva malunga nohambo lwakho ngokunjalo.
4.96 · Izimvo eziyi-230
Sisondele kwisibhedlele esitsha sasentshona se-UPMC. Ufikelelo olulula kwi-Rt 30 kunye nama-83. Cwangcisa uhambo lwemini lwaseGettysburg, eHershey, eLancaster okanye eHarrisburg kwaye emva koko ubuye uzonwabele ukuqubha ngorhatya(embindini kaMeyi- phakathi kukaSeptemba) okanye uphumle kwigumbi lakho labucala.
Singacebisa ngeendawo zokutyela ezahlukeneyo, iithiyetha kunye nezinto ekufuneka zenziwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Daneen
Siyathanda ukudibana kwaye sichithe ixesha sincokola neendwendwe zethu kodwa sikwayaqonda ukuba ngamanye amaxesha ufuna nje ixesha lokuphumla uwedwa. Silungile nokuba sesinye, masazise ukuba yintoni ekusebenzelayo.